Efa fanakona-masoandro hatramin’izay… | NewsMada
Efa fanakona-masoandro hatramin’izay…
Fanakona-masoandro eto Madagasikara rahampitso, indrindra any Mahajanga sy Toamasina. Takonan’ny volana ny masoandro. Be ny tsy mahalala izany, tsy miraika, tsy miraharaha… Ho an’ny sarambabem-bahoaka, efa fanakona-masoandro hatramin’izay, indrindra amin’izao fitondrana ao anatin’ny Repoblika IV izao. Nahoana?
Tsy mbola ahita-mangirana izay tena hoe fanarenam-pirenena sy fampandrosoana ifotony, indrindra ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Ny mpitondra aza no manakona ny anjara-masoandron’ny ambany lanitra noho ny tsy fanatanterahana ny fanamby nilokalokana sy nifanarahana tamin’ny fifidianana. Mby aiza?
Tsy vitan’ny tsy fahatanterahana ny fampanantenana amin’ny vahoaka ny raharaha, manampy trotraka ny tsy fanarahan-dalàna, ny kolikoly avo lenta, ny kiantranoantrano, ny fisian’ny tsimatimanota… Eo koa ny famoretana sy famotehana izay mitady hihetsika rehetra hoe manakorontana sy manongam-panjakana.
Ireny rehetra ireny, raho-matevina manakona ny anjara-masoandron’ny vahoaka ao anatin’ny tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fanjarian-tsakafo, tsy fisian’ny asa, ny ady tany, ny delestazy… Efa samy nampiaka-peo ny amin’izany ny mpanao politika, ny firaisamonina sivily, ny fiangonana…
Tsy mahita ny mpitondra? Na minia tsy mijery… Mila solomaso manokana amin’izay fanakona-masoandro izay; eny, na ny mpitondra ihany aza no tena tomponandraikitra voalohany amin’izany noho ny ataony na ny tsy vitany, araka ny fanamby sy ny fifanarahana tamin’ny vahoaka tamin’ny fifidianana.
Inona izay solomaso manokana izay? Fijerena ny tena zava-misy, fandinihan-tena amin’ny atao sy ny fomba fiasa, fandraisana ny hafa amin’izay lazainy, fiaikena ny fahadisoan’ny tena, fanitsiana ny lalan-kaleha… Raha tsy izany, tsy vitan’ny manakon-tena ny mpitondra, fa ho takona koa ny anjara-masoandron’ny ambanilanitra.
Hijabajaba lava amin’izao? Mila mandini-tena hahitana ny hafa; na mandinika ny hafa, hahitana tena…